Programmer တစ်ယောက်အဖြစ်အသက်မွေးတော့မယ်ဆိုရင် - ၂ - Active IT
by thantsin | Aug 21, 2019 | Development |0comments
Programming Language တစ်ခုအား လေ့လာရာတွင် တွေ့ရသည့် အခက်အခဲများ
Programmer တစ်ယောက် အဖြစ်အသက်မွေးတော့မယ် ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Platform နဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ရမယ့် Language ကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင် ပထမဆုံးလုပ်ရတာကတော့ အဲ့ Programming Language ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရတာပါ.
ဒီနေရာဟာ Programmer အများစု ဒုက္ခရောက်တဲ့ နေရာပါ. တချို့လည်း လေ့လာရင်းနဲ့ လက်လျော့သွားကြသလို တချို့လည်း ယောယောရောင်ရောင် နဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ Programmer အဖြစ်အလုပ်သာ ဝင်လုပ်တယ် ယောင်ပေပေနဲ့ မတိုးတက်ဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ဓါတ်ကျရတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်..
ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ လေ့လာတဲ့ ပုံစံမမှန်တာ ကြောင့်ပါ.. Programming လေ့လာတော့မယ်ဆို သင်တန်းတွေ. Udemy, Lynda, Udacity အစရှိတဲ့ အွန်လိုင်းသင်ကြားရေး Websites တွေက Online Courses တွေ. စာအုပ်တွေ၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပွထနေတဲ့ Tutorial တွေ စသည်ဖြင့် မျိုးစုံရှိပါတယ်.
ဒီမှာ အများစုစဉ်းစားကြတာက သင်တန်းတစ်ခုခုတက်မယ်.. နောက်ပိုင်းစာအုပ်ဖတ်ပြီးဆက်လေ့လာမယ်. ဒါမှ မဟုတ် အင်္ဂလိပ်လို နားထောင်ပြီး Lecture လိုက်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့လူတွေက Udemy လိုမျိုး ဈေးပေါပေါနဲ့ နိုင်ငံခြား သင်ကြားရေး Website တွေက Online Course တွေကြည့်မယ်.. ဒါမှမဟုတ်လည်း Torrent တွေအလကားရတဲ့ ဆိုဒ်တွေက ‌ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးကြည့်မယ်ပေါ့..
အစပိုင်းလုံးဝ မသိသေးခင် အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်မှုနှုန်းက အရမ်းသိသာပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ မသိတာတွေလည်း ရှိနေတုန်းပါပဲ.. ဒီတော့ ပိုသိရအောင် ဆိုပြီး စာအုပ် တစ်အုပ်ကနေ နှစ်အုပ်၊ နှစ်အုပ်က နေသုံးအုပ်ဖတ်တယ်.. အွန်လိုင်း Course တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု အချိန်ရသ၍ကြည့်တယ်.. ဒါပေမဲ့ တိုးတက်မှုနှုန်းက အစပိုင်းလိုမဟုတ်တော့ဘူး.. တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတက်မှုနှုန်း နှေးရာက နေ နောက်ပိုင်းကျတော့ တစ်ခုခု သိရမလားဆိုပြီး စာမျက်နှာ လေးငါးရာလောက်ရှိတဲ့ စာအုပ်ကြီး ထိုင်ဖတ်လိုက်တယ်.. ဘာမှ မထူးလာဘူးဆိုတဲ့ ဘယ်လောက်ဆက်လေ့လာလာ တိုးတက်မှုနှုန်းက မရှိသလောက် ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေကိုရောက်သွားတာပါ..
အဲ့လို အခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်သူမဆို အနည်းနဲ့ အများစိတ်ဓါတ်ကျပါတယ်.. Github ပေါ်က Code တွေကြည့်တယ်. နားမလည်ဘူး.. နားလည်အောင်ဆိုပြီး တက်နိုင်သမျှဖိလေ့လာတယ်.. ဒါလည်း နားလည်မလာဘူး ဆိုတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် စိတ်ဓါတ်ကျချင်စရာပါ..
အမှန်တော့ အဲ့ဒါက လေ့လာတဲ့ သူရဲ့ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး.. သင်တန်းတွေ စာအုပ်တွေနဲ့ သင်ပေးတဲ့လူက ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစား ကြိုးစား မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတချို့ကြောင့်ပါ.. ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း သင်တန်းဖွင့်ပေမယ့် ဒီနေရာမှာ သင်တန်းတွေနဲ့ စာအုပ်တွေရဲ့ သဘောကို နည်းနည်းပြောဖို့လိုပါမယ်..
အွန်လိုင်း သင်တန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပြင်က သင်တန်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားက ဘယ်လောက်နာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ Website က Online Course ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင်တဲ့လူဘက်ကကြည့်ရင် ဒါဟာ စီးပွားရေးလုပ်နေတာပါ.. စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ အညီ ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းတက်ပြီးရင် ဘာတွေကို ဘယ်လိုတွေတောင် ကျွမ်းကျင်သွားမှာ၊ ဒီသင်တန်းသာ တက်လိုက် ဒီ Programming Language ကြီးကို အရေကျိုပြာချပြီး ရေ‌‌နွေးကြမ်းထဲပါ ခပ်သောက် ပစ်လိုက်လို့ ရသွားမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ရေးပြီး ကြေငြာရပါတယ်..
အမှန်မှာ သင်တန်း၊ စာအုပ် မကလို့ သိကြားမင်းကိုယ်တိုင် ဆင်းလာလည်း အဲ့လိုဖြစ်အောင် သင်မပေးနိုင်ပါဘူး.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပထမဆုံးတစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကျောင်းတက်ခဲ့ကြပါတယ်.. အားလုံးတော့ ၆ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးတွေနဲ့ မအောင်ကြပါဘူး.. ဈေးအကြီးဆုံးကျောင်း ကျူရှင်တွေမှာတက်ပြီး ဆယ်တန်းကို အောင်တယ်ဆိုရုံ အောင်တဲ့လူလည်း ရှိသလို ဟို တောကြိုအုံကြား ကျူရှင်မရှိဘာမရှိ အရပ်က ကလေးတစ်ယောက်ကလည်း ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးထွက်ရင် ထွက်ပါတယ်.. ပြောချင်တာက အသင်ခံသူရဲ့ နားလည်နိုင်စွမ်းပါ.. (မြန်မာပြည် ပညာရေး စနစ်နဲ့ ဆရာဝန်ဖြစ်မှ ပညာတက်ဆိုတဲ့လူတွေကို ကျွန်တော် အယုံအကြည်မရှိပါဘူး)
ဒုတိယ ပြဿနာက ပညာရဲ့ အဆုံးမရှိတဲ့ သဘောနဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖြစ်မှုပါ.. ဘယ်ပညာရပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လေ့လာချင်စိတ်ရှိရင် အဆုံးမရှိပါဘူး။ လေ့လာတဲ့လူသာသေရင် သေသွားမယ် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကိုယ်မသိသေးတာတွေဟာ တစ်ခုပြီး တစ်ခုရှိနေတာပဲ.. အဲ့ဒါကြောင့် သူ့ဟာသူ Complete Guide ဘာညာ ဘလာ ဘလာ ဘယ်လောက်ရေးရေး ဘယ်စာအုပ် သင်တန်းမှ မစုံပါဘူး.. တစ်ခု ဖြတ်ပြောရရင် တကယ့် နိုင်ငံတကာ Programmer တွေကြားမှာ Language တစ်ခုထဲနဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက် အလုပ်လုပ်လာလည်း အဲ့ Language ကို သူသိတာ ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရှိပါတယ်လို့ ပြောလေ့ရှိတယ်.. အဲ့ဒါ အရမ်း ပညာတွေ တက်နေလို့ နှိမ့်ချတာ၊ သူများကို မပြောပြချင်လို့ လျှိုတာ တစ်ခုမှ မဟုတ်ဘူး.. အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲ..
မယုံရင် Programmer လောက်မှ မဟုတ်ဘူး ရူပဗေဒတို့ ဘာတို့နဲ့ နိုဘယ်ဆုရထားတဲ့ ပညာရှင်လောက်အထိသွားမေးလို့ရတယ်.. ဘယ်သူမှ ငါတော့ ဒီပညာကို အဆုံးအထိ တက်တယ်လို့ မဖြေဘူး.. တကယ်လည်း မတက်ဘူးကိုးဗျ.. ပညာရှင်အတွက် လေ့လာစရာနယ်ပယ်ဆိုတာ အမြဲကျန်နေတာပဲ.. ပြောချင်တာက စာအုပ်တွေနဲ့ သင်တန်းတွေမှာရေးထားတဲ့ Complete ဘာညာ ဆိုတာတွေကို မယုံနဲ့ .. လောကမှ တစ်ခုခုကို အစအဆုံး သိပြီး ပြန်ပြောရနိုင်လောက်အောင် စာသင်တဲ့လူတွေက နတ်တွေ ဘုရားတွေ၊ တန်ခိုးရှင်တွေမှမဟုတ်တာ..
တတိယ ပြဿနာကတော့ ပညာရဲ့ အဆင့်ဆင့် ကွဲတဲ့ သဘောပဲ.. ဆိုပါတော့ ကျွန်တော်က ကလေးတစ်ယောက်ကို မြန်မာစာ စသင်မယ်ဆို ‘က ကြီးရေး က’ ကနေစသင်ရတယ်.. အဲ့မှာ ကျွန်တော့်ဘာသာ ဘယ်လောက် စေတနာရှိရှိ တက်ပါစေတော့ဆိုပြီး ဦးပုညတော့ သူ့တေးထပ်ထဲမှာ ‘ဂျပ်ကောင်နှယ်ပန်းကြားက သန်းစကားခုဝါ ရမ်းကားလို့ တုလာလျှင်’ ဆိုပြီး ရေးလိုက်တာဆိုတာမျိုး ထည့်သင်လို့မရဘူး.. လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လောက်ကမှ ‘က ကလေးငယ်ချစ်စဖွယ်’ ပဲရှိသေးတဲ့ကလေးကို အဲ့ဒါသွားသင်ရင် ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ အသင်ခံရတဲ့လူက နားမလည်တဲ့ အပြင် နားတွေရှုပ်ပြီး နားလည်ပြီးသားပါပျောက်သွားရော .. Programming မှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ တချို့ကိစ္စတွေက အတွေ့အကြုံ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ရှိပြီးမှ သင်ပေးလို့ အဆင်ပြေတယ်. ဒီတော့ အစအဆုံး ပါဖို့ဆိုတာကြီးဟာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲ..
ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Programming Language မှမဟုတ် တစ်ခုခုကို လေ့လာတဲ့အချိန်မှာ အစအဆုံးတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကို မယုံပါနဲ့.. အများစုက အခြေခံကိုပဲသွားကြပါတယ်.. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဆင့်မြင်တဲ့ဟာတွေက သင်တဲ့လူ ရေးတဲ့လူဘက်က အရမ်းအားထုတ်ရသလောက် စိတ်ဝင်စားတဲ့လူနည်းတဲ့အတွက် စီးပွားရေးအရမကိုက်ပါဘူး.. စာသင်တဲ့လူလည်း ပါးစပ်ပေါက်နဲ့ဆိုတော့ မကိုက်တဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်ကြတာပဲ များပါတယ်.. ဒါက မြန်မာပြည်လောက်ကို ကွက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူ.. နိုင်ငံတကာ Udemy ဘာညာ စတဲ့ဟာတွေအထိ ဒီအတိုင်းပါပဲ.. အဲ့လို စာအုပ်တွေနဲ့ သင်တန်းတွေသာများတဲ့ အခါ လေ့လာတဲ့လူက အဆင့် တစ်ခုကို ရောက်လာပြီဆို ကိုယ့်ဟာကိုယ် မတိုးတက်တော့တာကို စခံစားမိပြီး စိတ်ပျက်လေ့ရှိပါတယ်.. စိတ်မပျက်ပါနဲ့ .. နောက်တစ်ပတ်ကျရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို တချို့ကို ကျွန်တော် ပြန်ပြောပေးပါ့မယ်.. အနည်းနဲ့ အများ တော့အကျိုးဖြစ်မှာပါ..